Fitsapana maimaim-poana mandritra ny 30 andro amin'ny fahitalavitra Sling - Novambra 2020 (Voamarina) - Fialam-Boly
Ahoana ny fomba ahazoana fitsapana maimaim-poana amin'ny fahitalavitra?
Miparitaka amin'ny alàlan'ny horonantsary Internet ny Sling TV serivisy mivantana . Ity tranonkala ity dia mamela anao hijery fahitalavitra mivantana amin'ny fitaovanao rehetra. Malaza any Etazonia io tranonkala io. Izy io dia iray amin'ireo voalohany amin'ny orinasa manolotra fahitalavitra avo lenta ho an'ny mpanjifa amin'ny vidiny mirary. Amin'ny sling TV izao ianao dia afaka mijery fahitalavitra tariby maimaimpoana amin'ny fampiasana ny andrana maimaimpoana. Ny serivisy fahitalavitra amerikana ambony indrindra dia an'ny tambajotran-tsakafo Dish TV.
Nanomboka tamin'ny 2015 ny tranokala ary nanova tanteraka ny fomba fihinan'ny olona fialamboly. Androany isika dia hijery ny fomba fisoratana anarana ho an'ny famandrihana maimaim-poana.
Momba ny Sling TV - Fampahalalana fohy sy fampidirana
Sling.TV dia sampana tambajotram-pifandraisana ary efa misy hatramin'ny 2012. Tiana kokoa noho ny serivisy fahitalavitra ambony Internet. Tamin'ny voalohany dia natomboka ho Discworld ary nanolotra streaming an-tserasera ho an'ireo mpampiasa. Hita any amin'ny fanjakana 50 rehetra any Etazonia izy io. Ny tranonkala dia fampiantranoana ireo tambajotra iraisam-pirenena rehetra. Ny tanjon'ny tranonkala dia ny hanolotra fialam-boly manara-penitra ho an'ireo mpampiasa azy. Ny serivisy ho an'ity tranonkala ity dia natao tamin'ny alàlan'ny Roku TV sy ireo fitaovana streaming.
Ny fiaraha-miasa dia nanampy tamin'ny fahitalavitra mivantana tamin'ny lampihazo. Ireo mpampiasa manana boaty streaming dia nisoratra anarana ho azy amin'ny famandrihana Sling TV. Na ankehitriny aza, ny tranonkala dia miara-miasa amin'ny serivisy mivantana maro hafa. Niara-niasa tamin'ny orinasa lehibe toa azy ireo koa izy ireo Disney , Tambajotra A&E, ary tamba-jotra Scripps mifanerasera mba hitondra fialamboly marobe amin'ny tranonkala. Io no trano tsy tambo isaina fantsom-pahitalavitra mivantana sy sarimihetsika.
Misintona ho an'ny iOS Misintona ho an'ny Android
Fomba ahazoana fitsapana maimaim-poana amin'ny fahitalavitra:
Ny Sling TV dia manome ny mpanjifany andrana maimaimpoana maharitra 7 andro. Ity dia miantoka anao afaka mitsapa ny serivisin'izy ireo alohan'ny hisoratra anarana amin'ny fifanarahana iray manontolo. Araho ity torolàlana ity mba ahafahan'ny andrana maimaim-poana atao amin'ny fitaovana.
Ny fitaovana izay alefanao dia tsy maintsy efa manana ny fampiharana TV sling. Na inona na inona sehatra, ampidino ny rindrambaiko amin'ny fitaovanao. Mila misoratra anarana amin'ny alàlan'ny sehatra mifanentana ianao hahazoana ity tolotra ity. Amin'izao fotoana izao, miaraka amin'ny drafitra ora mahafaly, azonao atao ihany koa ny misoratra anarana avy amin'ny tranokala amin'ny PC.
Amin'ny solosainao PC na Laptop anao, mankanesa any amin'ireto manaraka ireto rohy . Ao amin'ny pejy fandraisana mihitsy dia hahita ny safidy hisoratra anarana ianao.
Ampidiro ny antsipirianao marina, hanombohana, ny fanandramana maimaimpoana ny serivisy Sling TV. Amin'izao fotoana izao dia mila manome ny adiresy mailakao fotsiny ianao ary misafidy teny miafina hampiasa ora mahafaly aorian'ny fisoratana anarana ho an'ny kaonty dia miditra fotsiny amin'ny rindranasa amin'ny fitaovanao manokana.
Endri-javatra amin'ny Sling TV:
Misy fampiasana marobe azonao ialana amin'ny serivisy Sling TV. Ny tranokala dia mety ilaina amin'ny olona maro. Alohan'ny hisoratana anarana amin'ny fizahana maimaimpoana dia andao jerena ireo fiasa natolotry ny tranonkala.
1. Soloy TV Cable
Ny fampiharana Sling TV dia azo ampiasaina soloy ny famandrihana fahitalavitra mahazatra anao . Ny isan'ny Fantsona mivantana sy ny sarimihetsika eo amin'ny lampihazo dia mahatonga azy io hahaleo tena tanteraka. Any Etazonia dia manana ireo tambajotram-pahitalavitra malaza rehetra izy io. Serivisy maimaimpoana taloha toy ny famandrihana fialamboly an-tserasera toa an'i Netflix, Hulu, ary ny Prime Video.
2. Fandefasana famaritana avo
Sling TV dia manolotra ny mpampiasa amin'ny serivisy streaming avo lenta. Amin'ny alàlan'ny serivisy streaming HD, afaka mijery ny atiny mora eran'izao tontolo izao ianao amin'ny 1080P sy ambony. Tena faniriana izany ary mifanaraka amin'ny fenitra 2020. Aleon'ny rehetra fa afaka mahazo streaming HD farafaharatsiny anio.
Ny serivisy fahitalavitra sling dia mifanaraka amin'ny ankamaroan'ny fitaovana an-tserasera. Raha manana famandrihana ianao dia afaka miditra amin'ny tranokala manerana ny sehatra rehetra. Ny sasany amin'ireo endrika malaza indrindra dia ny PC, iOS, Android, PS4, Xbox One, AmazonTV, Roku TV, ary maro hafa. Ity fampiasa an-tsokosoko manerana ny sehatra rehetra ity dia mampalaza azy amin'ny besinimaro.
4. Cloud DVR
Ny endri-javatra DVR rahona dia mamela anao hijanona amin'ny fahitalavitra mivantana amin'ny Internet. Izy io koa dia azo ampiasaina handraketana ireo fandaharana amin'ny fahitalavitra tianao indrindra ambonin'ny rahona. Tena mahasoa indrindra ho an'ireo mpampiasa izay sahirana matetika. Ampiasao ity fampiasa ity raha tsy te-ho diso anjara amin'ny seho fahitalavitra mahaliana indrindra ianao. Isika rehetra dia amin'ny fandaharam-potoana be atao amin'izao andro izao. Andramo ny seho Cloud DVR hiaina fahitalavitra avo lenta.
Ny serivisy fahitalavitra sling dia mora azo erak'izao tontolo izao amin'ny alàlan'ny fampiharana marobe. Misy kinova maro samihafa amin'ny fampiharana azo alaina ankehitriny. Ireo fitaovana isan-karazany izay manohana ny serivisy dia manana fampiharana ho an'izany. Azonao atao ny misintona azy rehetra amin'ny tranokala ofisialy. Tena mora tokoa ny manangana ary tsy mila fahalalana teknika be.
Sling TV Happy Hours:
Ny rindranasa Sling TV sy ny tranokala dia namoaka rafitra ora mahafinaritra. Rehefa heverina fa mikatso ao an-tranony ny tsirairay, dia nanjary sarotra kokoa ny miala voly. Nandray an-tanana ity hetsika ity i Sling mba hanomezana fahafaham-po ny mpanjifa amin'izao fotoan-tsarotra izao. Ny rafitry ny ora mahafaly dia manome fidirana maimaimpoana amin'ny fantsona fahitalavitra rehetra ny mpampiasa manomboka amin'ny 5 PM ka hatramin'ny misasakalina. Ity no fotoana avo indrindra hijeren'ny olona fahitalavitra matetika. Ankehitriny rehefa tafahitsoka ao an-trano daholo isika, dia mitovy daholo, saingy tsy isalasalana fa dingana feno fahasahiana avy amin'ny fikambanana. Ny ora mahafaly dia mety ho sary tsara indrindra ho anao amin'ny fialamboly maimaim-poana mandritra ity quarantine ity.
Tamin'ny alàlan'ity torolàlana ity dia nanantena izahay fa handrakotra ny fampahalalana ilaina rehetra momba ny Sling TV. Araho ny torolàlana samihafa omena hahazoana ny traikefa tsara indrindra amin'ny tranokala sy fampiharana. Afaka miditra amin'ny sehatra ny olona avy any Etazonia mba hankafy fahitalavitra mivantana maimaim-poana. Ny fiasa amin'ny ora mahafaly dia tsy isalasalana fa manampy tokantrano maro hitoetra ho salama saina. Mijanona ho azo antoka ary mijanona ao an-trano rehefa mankafy fialamboly maimaimpoana maimaimpoana amin'ny TV sling.
Sling TV vs YouTube TV - Iza no tsara indrindra?
Netflix vs Hulu - The Ultimate Guide
Fanjakana Fahiny: Momba, Tantara, Mahazo Vola | Vaovao farany!
Adachi to Shimamura Season 2: Daty Famotsorana, Tetikasa, Toetra | Info feno!
avadiho ho lasa mp3 ny horonantsary youtube
amboary chromecast amin'ny pc tsy misy wifi
afaka mijery sarimihetsika maimaim-poana amin'ny Internet ve aho
misy safari ho an'ny windows
mijery sarimihetsika sy fandaharana amin'ny fahitalavitra an-tserasera maimaim-poana
lisitry ny apps smart tv samsung
mandefa horonantsary amin'ny mp3 ianao